पर्यटनको विकास कि विनास « Loktantrapost
पर्यटनको विकास कि विनास
२० फाल्गुन २०७३, शुक्रबार १५:३०
जव बैङ्कको मुखैमा भारु लिएर आएको व्यक्तिलाई भारुका दलालहरूले बैङ्क भन्दा वाहिर साट्दा धेरै दिने भन्दै भड्काइन्छ, अनि भारु बैङ्कबाट साटेर नेपाली मुद्रा लिएर नेपाल घुम्ने भारतीय पर्यटक जब आफ्नो देश फिर्नेवेलामा बैङ्कमा गएर नेपालको मुद्रा फिर्ता गरी आफ्नै देशको मुद्रा लिन चाहन्छ र हामी उसकै देशको मुद्रा दिन सक्दैनौ भने यो भन्दा पर्यटन क्षेत्रको दूरावस्था अरु के नै हुन्छ र ? सुन्दै शर्मनाक हुने यस अवस्थावाट कहिले मुक्ति पाउने र साँच्चै नै पर्यटन क्षेत्रको विकास कहिले हुने होला ?
नेपाल बैङ्क काँकरभिट्टाको गेटमा र बैङ्कभित्र देखिएको दृश्यले नेपालको पर्यटन व्यवसायको ओरालो लागेको अवस्था प्रष्ट पारेको छ । भारतीय पर्यटक भारु १२ हजार साटेर नेपाल घुम्न गएको र फर्कदा बँचेको नेपाली फेरि बैङ्कमा नै बुझाई भारु लिने क्रममा बैङ्कभित्र हँुदै गरेको विवाद यो पङ्तिकारले सुन्न पर्यो । बैङ्कमा पनि युवा कर्मचारी नै थिए । हिन्दीमा बोल्न कठिन भएर हो वा किन हो युवा अङ्ग्रेजीमा भन्दै थियो, अर्कातिर भारतीय पर्यटक ‘तिम्रो देशको पैसा किन स्वीकार गर्दैनौ ? तिम्रो देशको पैसा मेरो देशमा चल्दैन, मलाई मेरो देशको पैसा देऊ’ भन्दै थियो । म त लज्जित हँुदै गेट बाहिर गएर उभिएँ, युवा वाहिर आएपछि के भयो भनेर बुझ्दा बैङ्क आफ्नो २ लाख लिमिटको कुरा बताएर पन्छिएछ ।
पर्यटनको कुरा गर्ने देशको समृद्धिका लागि पर्यटनले ठूलो योगदान दिन्छ भन्ने अनि यस्ता गैर जिम्मेवार व्यवहार गरेर कति दिन पन्छिने ? खुल्ला र प्रतिस्पर्धात्मक बजारका नाममा भाारतीय रुपैयाँको कारोवारीलाई यसरी कति दिन नाङ्गो नाच्न छुट दिने ? त्यो पर्यटकले अव आफ्ना भारतीय मित्रलाई नेपालको बारेमा कस्तो सन्देश देला ? अनि नेपाल घुम्न आउने भारतीय पर्यटकहरुको सङ्ख्या वढ्ला कि घट्ला ? यस बारेमा बैङ्ककै आडमा रहेको पर्यटन कार्यालयले कहिल्यै विमर्श गरेको छैन । पर्यटन व्यवसायको सुदृढीकरणका लागि नेपाली जनताको करवाट तलव भत्ता खाएकाहरुले यसवारेमा विचार गर्दा के फरक पर्दो हो । किन हामी यति गैर जिम्मेवार भयौँ, हाम्रो आतिथ्यता र स्वागत जति धेरै बढाए पनि मुद्रा प्राप्तिमा हुने कठिनाइलाई हामीले सहज बनाएनौँ भने हाम्रो पर्यटन कुनै पनि हालतमा टिक्दैन ।
पर्यटन व्यवसायका लागि सहज मुद्रा प्राप्तिका लागि ट्राभल चेक, डिजिटल मुद्रा आदि प्रयोग भएको छ । ग्लोवल्ली एसेप्टेड करेन्सी (डलर लगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा)को पहुँच मात्रले नेपालको हकमा पर्यटन व्यवसाय पुरा हँुदैन किनकि भारतीय पर्यटकहरुको पनि नेपालको पर्यटन व्यवसायमा राम्रै योगदान छ । विशेष गरी नेपालमा खुलेका आँखा अस्पताल र क्यान्सर अस्पतालहरुमा भारतमा भन्दा कम मूल्यमा प्रभावकारी उपचार हुने भएकाले भारतीयहरुको आगमन हालैका दिनमा बढिरहेको छ । यस्ता अधिकांश भारतीय नागरिकहरु डिजिटल करेन्सीको पहुँच नभएकाहरु हुने भएकाले नेपाल आउँदा भारतीय मुद्रा नै लिई आउने गर्दछन् । अर्कोतिर धार्मिक पर्यटनका लागि आउने भारतीयहरु समेत भारतीय मुद्रा नै लिई आउने हुन्छन् । सिमामा रहेका अस्पतालहरुले त भारतीय मुद्रा नै स्विकार्ने भएकाले कुनै समस्या भएन तर भारतीय मुद्राको कृत्रिम अभावको अवस्था सिर्जना भएको छ ।
स्थलमार्ग हँुदै आउने भारतीय पर्यटकहरुका लागि लक्षित गरेर सरकारले इमिग्रेसनसँगै एउटा काउन्टरको व्यवस्था गर्न कुनै कठिन कार्य छैन । यदि यसो गर्ने हो भने भारतीय पर्यटकले नेपाली मुद्रा सजिलै प्राप्त गर्ने र फर्कदा वचेको नेपाली मुद्रा सटही गरी भारतीय मुद्रा सहज ढङ्गले प्राप्त गर्न सक्दथ्यो । यसवाट स्थलमार्ग हँुदै आउने पर्यटकहरुको सङ्ख्या यकिन गर्न पनि सकिन्थ्यो र तिनीहरुको पर्यटनमा योगदान समेत जानकारी लिन सकिन्थ्यो । अर्कोतिर भारतीय पर्यटकले नेपालको वारेमा राम्रो सन्देश दिन सक्दथ्यो । तर यसतर्फ ध्यान दिइँदैन किनकि यसो गर्दा देशलाई फाइदा हुन्छ नगर्दा व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ ।
हामी त आज पनि नागरिक हुन सकेनौ रैतिकै अवस्था भयो । नागरिक भएको भए आवाज उठाउँदथियौँ । जे गरे पनि हामी चुप छौँ । हाम्रो लागि हैन यो चिन्ता ती हाम्रा पाहुनाका लागि हो । हामी त जति भने पनि बट्टा तिरिरहेका छौँ, तिरिरहन्छौँ । तर भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी कम से कम त सटहीको व्यवस्था गर ।
युवाहरु आजभोलि पर्यटन व्यवसायका लागि लाग्दैछन् । झापामा पर्यटन प्रवर्धनका लागि विभिन्न कार्यक्रम र पर्यटन स्थलहरुको निर्माण हँुदैछ । अझ झापाको वाहुनडाँगीमा एसियन ग्रामीण पर्यटन महोत्सव आयोजना हुँदैछ । पर्यटनलाई सेवा र सत्कारमूलक उद्योगको रुपमा लिइन्छ । होटल खोलेर सेवा र सत्कारका नाममा पर्यटकको ढाड सेक्ने कार्यले पर्यटक प्रवर्धन होला ? नेपालको राजधानी काठमाडौँमा नेपाली नागरिकलाई त मिटरमा ट्याक्सी चलाउँदैन भने पर्यटकलाई के बाँकी राख्दो हो । राजधानीमा नै यही हाल छ भने अरुतिरको के अवस्था छ ? यस वारेमा कहिल्यै पर्यटकको धारणा वुझ्ने गरिएको छ ? प्रचार प्रसारका नाममा पर्यटन मन्त्रालयवाट गरिने खर्चले के परिणाम ल्याएको छ ?
होटल खोल्ने तर वास र खानमा पर्यटकको ढाड सेक्ने, ट्याक्सी चलाउने तर भाडा मनपरी गर्ने, भारतीय मुद्रा लिने तर जाने वेलामा सटही सुविधा उपलव्ध नगराउने कार्यले पर्यटन व्यवसाय हँुदैन, त्यो धन्दा हुन्छ । हामीलाई मन परे पनि नपरे पनि नेपालमा आउने भारतीय पर्यटकहरुले पनि अरु सरह नै सुविधा पाउनु पर्छ किनकि यसको पनि आफ्नै व्यावसायिक धर्म होला । त्यसैले सरोकारवालाहरुले विमर्श गरुन्, नत्र पर्यटनको विकास हैन विनास चाहि निश्चित छ ।